WARBIXIN: Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Doonaan Xulalka England & Italy Kulanka Finalka Ee Caawa | Dhexnimo Media
Home Ciyaaro WARBIXIN: Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Doonaan Xulalka England &...
Italy iyo England ayaa caawa garoonka Wembley ee magaalada London ku ciyaaraya finalka koobka Euro 2020 iyadoo xulkii badiya uu noqon doono boqorada Yurub.
Labada kooxood waxay garoonka soo galayaan iyagoo wata rikoodhyo fiican, Azzurri lagama badinin 33 kulan oo isku xigta halka Three Lions kaliya hal gool laga dhaliyay intii uu tartankaan socday oo dhan. Hadaba seddex iska horimaad ayaa go’aamin doona kulanka caawa.
Luke Shaw wuxuu ahaa mid wacdarro dhigaya markasta uu ka soo xaroodo garabka bidix gaar ahaan kulamadii xulalka Jarmalka iyo Ukraine, wuxuuna ugu sareeyaa xiddigaha England ee ugu fursad abuurka badan isagoo abuuray sagaal fursadood. Kulanka caawase waa inuu xiddiga Manchester United soo bandhigaa qaab ciyaareedkiisa ugu fiican si uu u celiyo weeraryahanka qaab ciyaareedka fiican ku jira Federico Chiesa.
Weeraryahanka Juventus waa mid tamar iyo orod badanba leh, waxaa u sii dheer inuu darbo kulul yahay, isagoo labo gool dhaliyay tartankaan Euro 2020, gool uu wareegii 16ka ka dhaliyay Austria oo uu xagal ciriiri ah ka toogtay shabaqa iyo kubadii uu qaaday ee uu ka dhaliyay Spain ciyaartii semi-finalka.
Luke Shaw ayaa wajihi kara ku celiskii kulankii semi-finalka markaasoo celinta Martin Braithwaite ay xadiday awoodiisa weerar.
Markii Raheem Sterling uu ciyaarayay kulankii semi-finalka Koobkii Adduunka ee 2018 ka dib markii uu Manchester City ku hogaamiyay horyaalka Premier League isagoo dhaliyay 18 gool, Giovanni Di Lorenzo oo hal sanno ka weyn waxa uu koobka ka soo daawanayay gobolka uu ka soo jeedo ee Tuscanyee dalkiisa Talyaaniga.
Daafaca midig wuxuu waqtigaas horyaalka heerka labaad u la soo gudbay kooxda Empoli. Sannad ka horna wuxuu ka ciyaaayay horyaalka heerka seddexaad ee Talyaaniga.
Di Lorenzo wuxuu koobkaan ku bilowday isagoo keyd ah laakiin dib uma uusan noqonin tan iyo markii uu dhaawacmay Alessandro Florenzi kulankii furitaanka ee Turkiga isagoo soo bandhigay qaab ciyaareedyo loo riyaaqay. Kulankiisii ugu adkaa wuxuu ahaa midkii Belgium ee uu ka horyimid xiddiga da’da yar Jeremy Doku. Sterling ayaase ah weeraryahan aad uga duwan da’ yarkaas, waana xiddig u sharaxan abaalmarinta xiddiga tartanka.
Gool uu dhaliyo Sterling waxay niyadjabin doontaa Italy madaama aan England laga badinin markasta uu Sterling gool u dhaliyo. Sidaasi darteed Di Lorenzo wuxuu caawimaad uga baahnaan doonaa daafaca dhexe Leonardo Bonucci.
Jorginho iyo Mason Mount si fiican ayaa isku garanayaan madaama ay lix isbuuc ka hor isla qaadeen Champions League oo ay Chelsea ku guuleysatay. Mount ayaa ka warqabi doona qaabka baasaska Talyaaniga ee uu dhiso saaxiibkiisa Stamford Bridge halka Jorginho uu isna ixtiraam la mid ah u hayo 22 jirkaan uu u ku tilmaamay inuu yahay xiddig booska saxan taagan mar walba.
Mount waa xiddig akhli badan oo awooda inuu baasas ka dhex bixiyo meelo aan la fileynin. Wuxuu helay aaminaada tababare Southgate, wuxuuna tartan la galayaa Jorginho iyadoo labada nin ay u tartamayaan inay ku biiraan sagaal ciyaaryahan oo isla qaaday sannad gudahiis koobka Euro iyo Champions League.
Previous article12 qof oo ku dhintay shil bas oo ka dhacay Turkiga
Next articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Ka Qayb-galay Xidhitaanka Dufcaddii Saddexaad Ee Barnaamijka Carbiska Shaqo Qaran + Sawiro